Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nchedo njem na Mberede » Pụta na South Lake Tahoe, ọkacha mmasị n'etiti ndị ọbịa
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
A chụpụrụ obodo California niile n'etiti ebe ntụrụndụ ọkụ na oke ebili mmiri
Ọkụ ahụ emebila ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ 500, merụọ mmadụ ise ahụ, ma kpọọ ihe karịrị 177,000 acres ọkụ, dịka data sitere na Cal Fire.
E nyere ndị bi na South Lake Tahoe iwu ka ha gawa ọwụwa anyanwụ taa.
Ndị ọrụ mmanye iwu na -aga n'ọnụ ụzọ ụlọ iji hụ na onye ọ bụla rubere isi.
Ihe dị ka mmadụ 24,000 ahapụlarị ụlọ ha n'okporo ụzọ awara awara nke jikọtara South Lake Tahoe na Sacramento.
Mwepụ na na gburugburu obodo South Lake Tahoe a ma ama na Calfiornia bịara dịka ndị ọrụ ọhịa US na -emechi ọha mmadụ iri na asatọ dị na California n'etiti oge ọkụ na -akpụzi ugbu a dị ka nke kacha njọ na ndekọ.
E nyere ndị bi n'otu obodo ama ama na California, South Lake Tahoe na ókèala steeti na Nevada, ka ha gaa ọwụwa anyanwụ taa, ya na ndị uwe ojii na -aga n'ọnụ ụzọ ụlọ iji hụ na onye ọ bụla rubere isi n'iwepu ọpụpụ, dịka ọkụ na -agbawa agbawa na -emechi. .
Enyerela iwu ịpụpụ ndị mmadụ n'obodo ezumike South Lake Tahoe, California dị ka ọkụ Caldor-otu n'ime nnukwu ọkụ ọkụ iri abụọ na-ere ugbu a na Golden State-emechiri. Foto sitere na South Lake Tahoe gosipụtara ikuku anwụrụ ọkụ, yana foto si na ebe mgbaba Sierra-at-Tahoe dị kilomita iri na abụọ (20km) n'ebe ndịda gosiri. ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ, ndị egbe mmiri snow na -enyere aka, na -achọsi ike igbochi ọkụ ọkụ.
Ihe dị ka mmadụ 24,000 ahapụlarị ụlọ ha n'okporo ụzọ awara awara nke jikọtara South Lake Tahoe na Sacramento. Ọkụ ahụ emebila ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ 500, merụọ mmadụ ise ahụ, ma kpọọ ihe karịrị 177,000 acres ọkụ, dịka data sitere na Cal Fire.
Ọkụ Caldor dị naanị 14% dị n'ehihie Mọnde, ndị ọrụ mgbanyụ ọkụ na Riverside na San Diego Counties, ndịda Los Angeles, na -eche ụdị ihe isi ike ndị a ihu na ịchịkwa ọkụ Chaparral. Ihe nkiri vidio dị egwu e wepụtara na ngwụsị izu gosiri ka ndị helikọpta na -awụsa mmiri buru ibu n'elu ọkụ ahụ, bụ nke ebilila n'ọkụ.
Ọkụ n'ọkụ bụ ihe na -emere onwe ya na California, ọ bụ ezie na ndị ọrụ gọọmentị na ndị ọkà mmụta sayensị atawokwa ụta mgbanwe ihu igwe maka ịgbatị oge ọkọchị na ime ka ọkụ ahụ ka njọ. Ndị ọkachamara California atakwala ụfọdụ ndị ọkachamara ụta - na onye bụbu onye isi ala Donald Trump - maka njikwa oke ọhịa adịghị mma.